၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး PoundSlots.com သည်လောင်းကစားခြင်းကိုနှစ်သက်သောသူများအားအရည်အသွေးပြည့်ဝသောဖျော်ဖြေမှုများကိုပေးစွမ်းရန်၊ သူတို့ကိုပျော်ရွှင်မှု၊ မျှတမှု၊ တရားမျှတမှု၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်လုံခြုံမှု ရှိ၍ ပျော်စရာကောင်းသောအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းတွင်ပြုလုပ်ရန်အခွင့်အရေးပေးခြင်းအားဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
PoundSlots.com ကို Soho Office 3A၊ Edge Water Complex၊ Elia Zammit လမ်း၊ စိန့်ဂျူလီယန်နိုင်ငံ၊ ProgressPlay လီမိတက်ကလည်ပတ်သည်။ ProgressPlay သည်မော်လတာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကန့်သတ်ထားသောတာ ၀ န်ခံကုမ္ပဏီဖြစ်သည် (C58305) Malta Gaming Authority မှလိုင်စင်ချထားပေးပြီး အောက်မှာလည်ပတ် MGA / B2C / 231/2012 လိုင်စင်နံပါတ် 16 Aprilပြီ, 2013 ရက်တွင်ထုတ်ပေးခဲ့သည်; ProgressPlay Limited is licensed and regulated in Great Britain by the Gambling Commission under account number 39335. Gambling can be addictive. Play responsibly.
လောင်းကစားခြင်းသည်အဖြစ်မှန်မှအနားယူရန်၊ အနားယူရန်နှင့်ကောင်းမွန်သောအချိန်ရရန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကစားသမားများကိုကြီးမားသောဆုများရစေပြီးသူတို့၏အိပ်မက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်စေလိုသဖြင့်တာ ၀ န်ရှိသောကစားနည်းများကို ပို၍ အရေးကြီးသည်။ ဤသို့မြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းဝင်များကိုသူတို့ကစားရန်ပိုက်ဆံပမာဏကိုထိန်းချုပ်ရန်အွန်လိုင်းကိရိယာများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အားလုံးတွင်တရားမ ၀ င်သည့်အသက် ၁၈ နှစ်အောက်များမှတားဆီးခြင်းဂိမ်းများကိုတင်းကြပ်စွာလိုက်နာသည်။
PoundSlots.com သည်နောက်ဆုံးပေါ် 128 bit bit Secure Socket Layer (SSL) စာဝှက်ခြင်းနှင့် firewall နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးအထိခိုက်မခံသောဒေတာများကိုအင်တာနက်မှကျွန်ုပ်တို့၏ကာကွယ်ထားသောဆာဗာများသို့လုံခြုံစွာလွှဲပြောင်းပေးသည်။ အွန်လိုင်းခရက်ဒစ် / ဒက်ဘစ်ကဒ်ကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီများကကိုင်တွယ်သည်။ PoundSlots.com သည်၎င်းကိုအဖွဲ့ဝင်များအား e-wallet ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရရှိနိုင်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာအကောင်းဆုံးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်းဖြင့်အသင်း ၀ င်ကျေနပ်မှုအမြင့်ဆုံးရရှိရန်ဖြစ်သည်။ သင့်တွင်ရှိနိုင်သောမေးခွန်းများသို့မဟုတ်စိုးရိမ်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင် 24/7 တွင်ဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသောအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ရှိသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးတွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်ပုံစံ၊ အီးမေးလ် (သို့) တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်းမှတဆင့်အချိန်မရွေး ...